အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် ဂျပန်နိုင်ငံရဲ. ရင်သားအလှဆုံး အမျိုးသမီးအကြောင်း | Buzzy
အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် ဂျပန်နိုင်ငံရဲ. ရင်သားအလှဆုံး အမျိုးသမီးအကြောင်း
လက်တလောမှာတော့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ရင်သားအလှဆုံးသော အမျိုးသမီးကို ရှာဖွေခြင်းဆိုတဲ့ ပွဲလေးကျင်းပခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲလေးမှာတော့ ဆုရသွားသူက တိုကျိုမြို.က အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် Ryoko Nakaokaပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လကျတလောမှာတော့ ဂပြနျနိုငျငံမှာ ရငျသားအလှဆုံးသော အမြိုးသမီးကို ရှာဖှခွေငျးဆိုတဲ့ ပှဲလေးကငျြးပခဲ့ပွီး ဖွဈပါတယျ။ ဒီပှဲလေးမှာတော့ ဆုရသှားသူက တိုကြိုမွို.က အသကျ ၂၃ နှဈအရှယျ Ryoko Nakaokaပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ. သေသေချာချာစီစစ်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်ရဲ. Bioppai Contest (ရင်သားအလှဆုံး) ပြိုင်ပွဲရဲ. အနိုင်ရရှိသူကို ရွေးချယ်ခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ် ။ ဒီအမျိုးသမီးကို ဒိုင်အဖွဲ့ဝင် ငါးဦးထဲက သုံးဦးက ရွေးချယ်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒိုငျအဖှဲ့ဝငျတှရေဲ. သသေခြောခြာစီစဈပွီး ၂၀၁၆ ခုနှဈရဲ. Bioppai Contest (ရငျသားအလှဆုံး) ပွိုငျပှဲရဲ. အနိုငျရရှိသူကို ရှေးခယျြခဲ့တာ ဖွဈကွောငျး သိရပါတယျ ။ ဒီအမြိုးသမီးကို ဒိုငျအဖှဲ့ဝငျ ငါးဦးထဲက သုံးဦးက ရှေးခယျြခဲ့တာ ဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။